I-Kali Linux 2021.2 Ifika ngezicelo ezihlanganisiwe, izithuthukisi zokuxhaswa kwe-RPI nokuningi | Kusuka kuLinux
I-Kali Linux 2021.2 Ifika nge-Containerized Apps, i-RPI Support Enhancements, nokuningi
Okuhle | 09/06/2021 14:40 | Kubuyekezwe ku- 10/06/2021 01:41 | Ukusatshalaliswa
Zimbalwa izinsuku ezedlule ukukhishwa kwenguqulo entsha yeKali Linux 2021.2 kumenyezelwe futhi kufaka phakathi izihloko nezici ezintsha, njengokufinyelela kwe-port okuyilungelo, amathuluzi amasha, nokusetshenziswa kokumisa okususelwa kukhonsoli.
Kulabo abangazi ngokusatshalaliswa kufanele bakwazi lokho yakhelwe ukuhlola izinhlelo zokuba sengozini, yenza ukucwaningwa kwamabhuku, uhlaziye imininingwane eyinsalela bese uthola imiphumela yokuhlaselwa ngabenzi bobubi be-cyber.
Kali kufaka phakathi elinye lamaqoqo aphelele kakhulu wamathuluzi ochwepheshe bezokuphepha be-IT, kusuka kumathuluzi wokuhlola izinhlelo zokusebenza zewebhu nokungena kwamanethiwekhi angenantambo kuya ezinhlelweni zokufunda idatha kuma-chips e-RFID. Ikhithi ifaka ukuqoqwa kokuxhashazwa nezinsiza ezingaphezu kwezingama-300 zokuhlola ezokuphepha ezinjenge-Aircrack, Maltego, SAINT, Kismet, Bluebugger, Btcrack, Btscanner, Nmap, p0f.
Ngaphezu kwalokho, ukusatshalaliswa kufaka amathuluzi okusheshisa ukukhethwa kwamaphasiwedi (Multihash CUDA Brute Forcer) kanye nokhiye be-WPA (Pyrit) ngokusebenzisa ubuchwepheshe be-CUDA ne-AMD Stream, obuvumela ukusetshenziswa kwama-GPU ekhadi levidiyo le-NVIDIA ne-AMD ukwenza imisebenzi yekhompyutha.
1 I-Kali Linux 2021.2 Izici Ezintsha Eziyinhloko
2 Landa bese uthola iKali Linux 2021.2
I-Kali Linux 2021.2 Izici Ezintsha Eziyinhloko
Kule nguqulo entsha yeKali Linux 2021.2 IKaboxer 1.0 yethulwe, ukuthi ikuvumela ukuletha izinhlelo zokusebenza ezisebenza esitsheni esizimele. Isici seKaboxer ukuthi iziqukathi zohlelo lokusebenza zilethwa ngohlelo olujwayelekile lokuphathwa kwephakeji futhi zifakwe kusetshenziswa okusebenziseka kahle.
Okwamanje kunezinhlelo zokusebenza ezintathu eziqukathiwe ekusatshalalisweni: Isivumelwano, i-Firefox Developer Edition, neZenmap.
Olunye ushintsho olugqamile yilolo Kuphakanyiswe ukusetshenziswa kali-Tweaks 1.0 nge-interface yokwenza lula ukumiswa kwe-Kali Linux. Okusetshenziswayo ikuvumela ukuthi ufake amathuluzi wamathuluzi angeziwe, shintsha i-Prompt yeShell (iBash noma i-ZSH), nika amandla amakhosombe wokuhlola, futhi ushintshe amapharamitha ukusebenzisa ngaphakathi kwemishini ebonakalayo.
Futhi i-Backend yenziwe kabusha ngokuphelele ukugcina igatsha le-Bleeding-Edge linamaphakeji wakamuva kanye ne-kernel patch ingeziwe ukukhubaza umkhawulo wokuxhuma abalawuli kumachweba wenethiwekhi anelungelo. Ukuvula isokhethi lokulalela emachwebeni angaphansi kwe-1024 akusadingi amalungelo anwetshiwe.
Tambien Ukungezwa okugcwele kwe-Raspberry Pi 400 monoblock kungeziwe futhi ukuhlanganiswa kwamabhodi we-Raspberry Pi athuthukisiwe (i-Linux kernel ibuyekezelwe enguqulweni 5.4.83, ukusebenza kwe-Bluetooth kuyaqinisekiswa kumabhodi we-Raspberry Pi 4, i-kalipi-config entsha ne-kalipi- tft- config, isikhathi sokuqala sebhuthi sincishisiwe Imizuzu engama-20 kuya kumasekhondi ayi-15).
Kungezwe ikhono (CTRL + p) ukushintsha ngokushesha phakathi kolayini owodwa ne-command-line command Prompt esigungwini.
Intuthuko yenziwe ku-interface yomsebenzisi esekwe kuXfce.
Amandla wephaneli yokuqalisa esheshayo, etholakala ekhoneni eliphezulu elingakwesokunxele, enwetshiwe (kungezwe imenyu yokukhetha ukuphela, izinqamuleli ezizenzakalelayo zinikezwa isiphequluli nomhleli wombhalo)
Kumenenja yefayela kaThunar, imenyu yokuqukethwe inikela ngenketho yokuvula umkhombandlela njengezimpande.
Amaphephadonga amasha ahlongozelwe ideskithophu nesikrini sokungena ngemvume.
Kungezwe izithombe ze-Docker zezinhlelo ze-ARM64 ne-ARM v7.
Kwenziwe ukwesekwa kokufaka iphakethe lamathuluzi okufana kumadivayisi ane-chip ye-Apple M1.
Landa bese uthola iKali Linux 2021.2
Kulabo abanentshisekelo yokukwazi ukuhlola noma ukufaka ngqo inguqulo entsha ye-distro kumakhompyutha abo, kufanele bazi ukuthi bangalanda isithombe esigcwele se-ISO kuwebhusayithi esemthethweni wokusabalalisa.
Ukwakhiwa kuyatholakala ku-x86, x86_64, ukwakhiwa kwe-ARM (i-armhf ne-armel, i-Raspberry Pi, i-Banana Pi, i-ARM Chromebook, i-Odroid). Ngaphezu kokuhlanganiswa okuyisisekelo neGnome nenguqulo encishisiwe, okuhlukahlukene kunikezwa nge-Xfce, KDE, MATE, LXDE ne-Enlightenment e17.
Ekugcineni yebo Usuvele ungumsebenzisi we-Kali Linux, kufanele nje uye esigungwini sakho bese wenza umyalo olandelayo lokho kuzophatha ukuvuselela isistimu yakho, ngakho-ke kuyadingeka ukuthi uxhumeke kunethiwekhi ukuze ukwazi ukwenza le nqubo.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Ukusatshalaliswa » I-Kali Linux 2021.2 Ifika nge-Containerized Apps, i-RPI Support Enhancements, nokuningi
IBitcoin isivele isemthethweni e-El Salvador futhi iba yizwe lokuqala ukuyivuma njengethenda elisemthethweni
I-GRUB 2.06 isivele ikhishiwe futhi ifaka ukwesekwa kwe-LUKS2, SBAT nokuningi.